မီးလောင် ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် တမူးနန်းဖာလုံ ဈေးသူဈေးသားများ နေရာအတည်တကျ မရှိသည့်အတွက် အခက်ြ?? - Yangon Media Group
မြန်မာ- အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် အရောင်းအဝယ် အကောင်းဆုံး ဈေးတစ်ဈေးဖြစ်သည့် နယ်စပ်နန်းဖာလုံဈေးကြီး မှာ ဖေဖော်ဝါရီလဆန်းပိုင်းက ပေါ့ဆမီးကြောင့် ဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း ၅၃ ခန်း၊ အိမ်ခြောက်လုံး၊ ဂိုဒေါင်များဆုံးရှုံးခဲ့ရာ ယခုအချိန်အထိ မိမိ၏ဈေးဆိုင်ခန်းများတွင် ပြန် လည်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် ဈေးသူ၊ ဈေးသားများ နေ့စဉ်ဈေးရောင်းချရေး အခက် အခဲရှိနေကြောင်း နယ်စပ်နန်းဖာလုံဈေးမှ ဈေးကော်မတီဝင်တစ်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။
မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ဈေးဆိုင်ခန်းများမှ ဈေးသည်များသည် ယာယီဈေးဆိုင်ခန်းများနေရာ တွင်သက်ဆိုင်ရာက နေရာချပေး ခဲ့သော်လည်း နေရာကျပ်တည်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ မိမိ၏ဈေးဆိုင် ခန်းနေရာမဟုတ်သဖြင့် ဖောက်သည်များနှင့် လွဲချော်နေခြင်းတို့ ကြောင့် ဈေးအရောင်းအဝယ်လုပ် ငန်းများ အခက်အခဲရှိနေကြောင်း ဈေးသည် မသန္တာ၏ပြောကြားချက် အရသိရသည်။
”ဈေးရောင်းနေကျနေရာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ရောင်းအားတွေ ကျတာမျိုးရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဝယ်နေကျ ဖောက်သည်ကလည်း ဈေးဆိုင်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက် လွဲချောမှုတွေဖြစ်ရပါတယ်။ မီး လောင်ပြီးနောက် ကိုယ့်ဈေးဆိုင် နေရာမဟုတ်တဲ့အတွက် အရောင်း အဝယ်ကိစ္စတွေမှာ အခက်ကြုံရ တာမျိုးရှိပါတယ်။ သီတင်းကျွတ် ရာသီကစတင်ပြီး ဈေးရောင်ကောင်းပေမယ့် မူလနေရာကိုတော့ မမီဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ မူလဈေး ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့် နေရာကိုယ် ဆိုင်ခန်းရဖို့လည်းလို အပ်ပါတယ်” ဟု နယ်စပ်နန်းဖာ လုံ ဈေးကော်မတီက ဦးခင်မောင်ချိုက ပြောသည်။ ယခုအခါဈေးသူဈေးသားများ၏ ထည့်ဝင်ငွေတို့ဖြင့်ဈေး သစ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နေ ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှ အီဘိုလာရောဂါ ကူးစက်လာသဖြင့် အမေရိကန်ဆရာဝန်များက အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ အီဘိုလ
ကိတ်ဝင်းစလက်ပြောပြသော တိုက်တန်းနစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း လျှို့ဝှက်ချက် ငါးခု
ဂျာမနီ – ဆွီဒင် ပွဲအပြီး နှစ်ဖက်နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကစားသမားများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်၊ ဂျာ??
အိန္ဒိယလက်ရွေးစင်အသင်းနှင့် အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲကစားမည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်း ပြင်